Gudoomiyaha Golaha Guurtida Maamulka KG Somalia Malaaq Xasan Shure oo Baydhabo lagu caleemo saarey – idalenews.com
Gudoomiyaha Golaha Guurtida Maamulka KG Somalia Malaaq Xasan Shure oo Baydhabo lagu caleemo saarey
Xaflad si weyn loo soo agaasimay isla markaasna ay goob joog ka ahaayeen masuuliyiin isugu jira xildibaano ka socda dowlada federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Bay, ergada lixda gobol, bulshada rayidka, haween, dhalinyaro iyo fanaaniin ayaa ka dhacday xarunta ADC ee magaalada degmada Baydhabo.
Xafladaan caleemasaarka ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro hidaha iyo dhaqanka gobolada Koonfur galbeed Soomaaliya, heeso, gabayo iyo maadeys gaaban oo ka turjumaayo nabada & isku duubnaanta waxaa ku soo bandhigay fanaantii arlaadii ee uu hormuudka ka ahaa Mustafa , oo ka mid ahaa fanaantii hobolada Horseed ee ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa hallkaasi kahadlay masuuliyiin kaladuwan sida masuuliyiinta iyo hawl wadeenadii shirka dhismaha dowlad goboleedka, masuuliyiinta degmada Baydhabo iyo qaarkamid ah ururada kaladuwan ee bulshada magaalada.
Masuuliyiinta halkaas ka hadashey waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Sheekh Aadan Madoobe, Xildhibaan Maxamuud Cabdi Xasan Beekoos, Musharaxiinta Maamulkaas C/fataax Geeseey, C/laahi Max’ed Idiris Leesta iyo kuwa badan waxayna dhamaantood ku nuuxnuuxsadeen sida ay oga go’an tahay in shirkaan uu guuleysto isla markaasna golaha cusub gacan buuxda looga siiyo howsha culus ee loo ikmadey ee ay ummada Koonfur Galbeed ka sugaayaan.
Magaca Xildhibaanada federaalka Soomaaliya oo ku hadlayay Xildhibaan Sh. Aadan Madoobe ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinkii loo soomaray dhismaha Dowlad goboleedkan maanta uu maraayo qaybihiisa ugudanbeeya lanadhihi karo waalagu guuleystay maxaayeelay ayuu yiri golihiisa
Senedka ayaa sibuuxda loodhameystiray goordhowna madaxweynaha iyo kuxigeenadiisa ayaa ladooran doonaa waatan hadaba ufadhidaan ayuu siiraaciyey Mudane Sh.Aadan Madoobe.
Xildhbaan Sh.Aadan Madoobe ayaa sidoo kale sheegay in siijoogi doono saacadaha soosocdana Baydhabo soogaari doonaan wefdi balaaran oo katirsan xukuumada federaalka oo maantadan ahayd in aan isa sooraacno ayuu yiri arima jira awgeed u baaqdeen.
Golaha Guurtida oo ka kooban 72 ayaa dhowaan Malaaq Xasan Shure u doortay inuu noqdo shir gudoonka golaha guurtida dowlada goboleedka KG Soomaaliya, sidoo kale ergadu waxay doorteen labo ku xigeen oo uu yeelanaayo golahaas. Waxaana dhowaan la filayaa in lagu dhawaaqo Madaxweyne iyo 2 ku xigeen, ka dibna la doorta golaha shacabka maamulka lixda gobol aan la ogeyn xiliga si rasmi ah loo guda gali doono xulistiisa.
Idale News Online, Baydhabo, Somalia
Qarax ka dhacey degmada Marka ee Gobolka Sh/Hoose & dagaal qaraar oo AMISOM iyo Shabaab ka dib dhex maray
Duufaan Baraf wadata oo mar kale ku dhufatay gobolada koonfuureed ee dalka Mareykanka